LX1 Kusarura Kuisa Mwenje - MediaLight Bias Lighting
Kugamuchirwa kuLX1 yekuisa peji
Deredza njodzi yekukuvara kune yako nyowani LX1. * Ndokumbira kuti uverenge ino yekumisikidza gwara uye tarisa ipfupi yekumisikidza vhidhiyo yemakore ekunakidzwa.
* (Ehe, kana yako LX1 ikatsemuka panguva yekumisikidza yakafukidzwa pasi peLX1 2-Year Warranty, asi zvinotora mazuva mashoma kuti titore zvimwe zvikamu kwauri).
Makwara emhangura akachena muLX1 yako akanakisa maconductor ekupisa nemagetsi, asi zvakare akapfava uye anogona kubvaruka zviri nyore.
Ndokumbira usiye makona akasununguka zvishoma uye usazvimanikidza pasi. (Hazvikonzere chero mimvuri uye mwenje haidonhe). Kumanikidza makona kunogona kukonzera ivo, pane imwe nguva, kubvarura.
Ok, neizvozvo zviri munzira, ndapota tarisa yedu yekumisikidza vhidhiyo.
Ndokumbira utarise: Tichiri kushanda pane yedu LX1 vhidhiyo, tiri kuratidza iyo yekumisikidza vhidhiyo yeyedu MediaLight zvigadzirwa. Maitiro ekumisikidza akafanana zvakafanana, kunyangwe zvimwe zvinhu zvichisiyana pakati pezvigadzirwa.
Paunenge uchiisa iyo LX1 nyowani pakuratidzira kwako, kana urikutenderera mativi matatu kana mana, semuenzaniso, kana chiratidziro chako chiri pachikomo chemadziro:
1) Pimisa 2 inches kubva kumucheto kwechiratidziro.
2) Kutanga kukwira padivi pechiratidziro kudivi riri padyo nechiteshi che USB, kutanga kubva pa SIMBA (chivhariso) KUGUMA kwechikamu.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kucheka chero akareba urefu kana iwe wapedza. Kana chiratidziro chako chisina chengarava che USB, tanga kukwira kuchiratidziro kudivi riri padhuze nesimba remagetsi, ingave tambo yemagetsi kana bhokisi rekunze sezvarinowanikwa pane kumwe kuratidzwa. Kana iri pakati chaipo, flip mari. :)
Magetsi ako akafukidzwa pasi peyakajeka 2-gore garandi uye isu tinofukidza mabhatani kuiswa, saka usanetseke zvakanyanya. Kana iwe ukaita tsvina yeLX1, ingo taura nesu.
Kana iwe uchida kucheka yakawedzera kureba kubva pamutsara, iwe unogona kuicheka pamuchena mutsetse unoyambuka yega yega peya ekubatana. Cheka pamutsetse pazasi:
Izvo zvinofanirwa kufukidza zvese zvekuisa kana iko kuratidzwa kuri pachigadziko kana kumadziro kukwira.
Kana iwe uri kuverenga izvi uye zvachose kuvhiringidzika, ndapota usanetseke. Nditaurire neni kuburikidza nehurukuro yedu (pasi kurudyi peji ino). Ini ndichave ndichiwedzera mamwe mafoto uye mavhidhiyo mumazuva anouya. Tichatora yako LX1 kusimuka uye kumhanya pasina nguva.
Vagadziri veLX1 Bias Lighting,
MediaLight Bias Lighting uye
Vaparidzi veMapfumo & Munsil Benchmark